Ixesha kunye nabahlobo 37
Oonobumba uH. T. W. S. S. T. K. S. Bafundwe ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, kodwa kufuneka baphinde bajike ngapha nangapha. Njengoko sisazi i-zodiac, ileta yokuqala uH. kwindawo ye-aries, owokuqala uT. e-aquarius, W. kwi-capricorn, owokuqala uS. e-scorpio, owesibini uS. kwi-libra, okwesibini uT. kwi-leo, K. kumhlaza, kunye neyesithathu uS. kwi-taurus. Oonobumba banokufumaneka kwiincwadi zeMasonic, kodwa akukho magama eme kuzo ezi leta, okanye iintsingiselo zawo, zinikiwe kuyo nayiphi na incwadi. Kuya kuthi, ke, ichukunyiswe ukuba ukubaluleka kwabo kuyimfihlo kwaye kubalulekile kwaye kungenzelwanga myalelo kunye nokukhanya kwabo bangazange bathathe isidanga seRoyal Arch Isahluko. Umbhali alililo ilungu leMult Fraternity, akafumani myalezo nakulo naluphi na u-Fraternity ngokubhekisele kwi-Masonry, kwaye akazenzi njengalo naluphi na ulwazi lweemfihlelo ze-Masonic Craft. Kodwa isimboli lulwimi oluqhelekieyo. Nabani na oyiqondayo ngokwenyani kufuneka afunde intsingiselo yelitye lesibane ngokukhanya kweMasonry, ebandakanywe ku-zodiac, kwaye icace gca ngokukhanya okunika i-zodiac, nangokobungakanani bayo oyamkelayo. Iimpawu ezine ze-zodiac, i-gemini, virgo, sagittary kunye neepisces, zishiyiwe njengezingafuneki emsebenzini, okanye kungenjalo zibandakanyiwe kwiimpawu, i-taurus, i-leo, i-scorpio kunye ne-aquarius. I-Taurus, i-leo scorpio kunye ne-aquarius ziphawulwa ngoonobumba u-S. T., S. T., ebekwe phakathi phakathi kweempawu aries, umhlaza, libra kunye capricorn. Ukuba iimpawu okanye oonobumba abajongene omnye komnye badityaniswa yimigca, kuya kwenziwa iminqamlezo emibini. Umnqamlezo obunjwe ngumgca othe nkqo weH. S. kunye nomgca othe tye uK. W. sisiphelo somnqamlezo we-zodiac, i-aries-libra kunye ne-cancer-capricorn.Umnqamlezo owenziwe yimigca uS. S. kunye noT. T. ngumnqamlezo oshukumayo we-zodiac, owenziwe zimpawu ze-taurus-scorpio kunye ne-leo-aquarius. Le miqondiso ishukumayo kunye nomnqamlezo ziphawulwa zizilwanyana ezine ezingcwele: inkunzi okanye inkunzi, itaurus, eboniswe yileta S .; ingonyama, i-leo, eyileta T .; ukhozi okanye i-scorpio, endaweni apho kunobumba u-S .; Indoda (ngamanye amaxesha ingelosi) okanye i-aquarius, endaweni yeleta uT. Ukujonga ubudlelwane kunye nezikhundla zoonobumba kunye neempawu zala macala mabini: Ileta uH. kunye ne-S. yayo ejongene nayo, imele intloko yelitye elingumxholo kunye nesiseko salo, kwaye ihambelana ne-aries kunye ne-libra. Iileta K. kunye noW. imele amacala amabini eli litye, elihambelana neempawu zomhlaza-capricorn. Lo ngumnqamlezo we-zodiac omiyo. Ileta ephezulu uS. kunye nonobumba ongezantsi uS. imele ikona ephezulu kunye nekona yayo esezantsi yelitye elingaphantsi kwaye ihambelana neempawu taurus-scorpio zodiac. Ileta ephezulu uT. kunye nonobumba osezantsi uT. ihambelana nelinye ikona elingasentla kunye necala eliphantsi lembombo yelitye lesiseko, kunye neempawu aquarius-leo zodiac, ezenza umnqamlezo oshukumayo we-zodiac. Oonobumba belitye eliphambili, okanye imiqondiso ye-zodiac, banokusetyenziswa ngababini ngeendlela ezininzi. Iya kuqaphela iileta zentloko kunye neziseko kunye namacala elitye eliphambili ahlukile kunye oonobumba abahlukileyo (S. S. kunye noT. T.) yeembombo ezihambelana nomnqamlezo oshukumayo we-zodiac, ephawulwa zizilwanyana ezine ezichazwe apha ngasentla, ziyafana. Ukuba oonobumba belitye elingaphezulu kunye nezikhundla zabo, kunye neempawu zodiac yayikukuba iphazanyise ingqondo kwaye benze ukuba abantu ababufumanayo, bangalusebenzisi kwaye kufanele ukuba baphoselwe ecaleni. Kodwa banazo, enyanisweni, ukubaluleka okunzulu, ukubaluleka komzimba kunye ngokomoya.
I-zodiac imele umntu kwindalo iphela kunye nendalo emntwini; ilitye eliyintloko limele umntu. Inkcazo ngezikhundla athe umntu wabekwa kuzo emhlabeni kunye nokuhlakulelwa kwento entle azoyisa ngayo ezi zinto zimtshutshisayo, phambi kokuba anyukele kwisithsaba nozuko lobomi bakhe, yinde kakhulu ukuba izame. Ngamafutshane kuphela onokunikwa apha. Njengoko umntu wenyama ebekwe kwihlabathi lasemhlabeni kwi-zodiac yakhe, ngoko ke umntu njengomoya ubekwe kwinyama yomzimba, umzimba wakhe wenyama. Njengomntu ozelwe ngumntu obhinqileyo ovela kwisimo sakhe esiphantsi sento yasemzimbeni, asebenze ngobume bakhe bezilwanyana, anyuke aye kuzuko lobukrelekrele bengqondo emhlabeni, ngoko ke indoda njengomoya kufuneka yoyise kwaye inyuke isuke kwisimo sayo sesilwanyana sukuma kwaye ugqibe umntu wengqondo njengesithsaba sokomoya kunye nozuko. Njengo-Ixion kwintsomi yamaGrike wabotshelelwa emnqamlezweni, ukuze ahlawulele ubugwenxa bakhe, unjalo umntu obekwe emhlabeni ukuba azalisekise ikamva lakhe; kwaye, unjalo umntu njengomoya obekwe emzimbeni wakhe wenyama ukuba wenze iimvavanyo zobume bakhe bokwenyama, ukuba ukhathazwe ngu, ade ayoyise, imeko yesilwanyana, emva koko adlule kwaye ahlanjululwe ngalo lonke uhlobo lovavanyo kwaye izilingo, ukuze zilunge kwaye zizingqine zikufanele ukugcwalisa indawo yakhe efanelekileyo kwindalo iphela. Iimpawu zodiac zibonisa amanqanaba kunye nomthetho ngokusebenza ngokwasenyameni nangokwengqondo nangokwasemphefumlweni nangamadoda okomoya ezenzweni zawo zodiacs, ngaphakathi kwe-zodiac ebandakanya konke. Iileta ezikwilitye eliyintloko mazibonise indlela kunye nendlela umntu onomoya esebenza ngaphakathi kuyo umzimba wenyama kwi-zodiac awayebekwe kuyo, ukuze abe lilitye eliyintloko eligqibezela iarch yasebukhosini. Umsebenzi weRoyal Arch Isahluko unokunika uphawu lweeleta kunye nelitye eliphambili; kodwa inokuba luphawu kuphela. Umntu njengomoya unokwakha i-arch yakhe, kodwa akayigqibeli-ayizalisi ngokwenene kubomi enye. Ukohliwe; Uyabulawa ngababandezeli bakhe. Ngalo lonke ixesha esifa uyavuswa aze abuye, kwaye uya kuqhubeka nomsebenzi wakhe de aphakame aze azalise indawo yakhe aze ayigqibe i-arch yakhe etempileni. Isangqa sobomi bakhe, i-arch, iya kugqitywa. Akazukuphinda aphume.
Ilitye lembombo kuwo wonke uMason othathe iArch Arch Isahluko libonisa oko xa kufanelekile kwaye elungele ukugqiba nokuzalisa ubomi bakhe-kule tempile ayakhiwanga ngezandla. Indoda njengeMason, ilitye lesiseko setempile, ngoku ilele emazantsi esakhiwo. Yena, yona, isendaweni yesondo, i-libra, ye-zodiac yakhe. Imelwe kukuphakama, imelwe kukuzikhulisa. Emva kokuthatha izikhundla eziboniswe ngoonobumba kwilitye elingaphezulu, okanye imiqondiso ye-zodiac, kwaye enze umsebenzi ofunwa ngunobumba ngamnye okanye uphawu, makaphakame ngokusebenza kwakhe aze asebenze entloko-isithsaba nozuko lomntu. Xa ilitye liphakanyisiwe endaweni yesondo liye entloko, yena, indoda, ilitye eliyintloko, liya kuba lingafiyo. Uya kuba yiyo yonke loo nto ithethwayo ngelitye eliMhlophe ekulo igama elitsha, igama lakhe elitsha, awenza lona njengophawu lwelo litye, ilitye lokungafi.